Programme fiarovana ny vola miditra - World Trade Exchange
programa fiarovana ny vola miditra
MAHASOA VOAVOA VOAVITRA 12 VOLANA AO AMIN'NY 24 ora
INONA NO PROGRAMA FIAROVANA REVENUE?
Ny 'Program Revenue Protection' dia natao hanampiana anao hahatratra ny tanjonao mandritra ny 12 volana ao anatin'ny 24 ora nefa tsy hivarotra vokatra na serivisy. Ny fandefasana vokatra na serivisy dia azo alamina mandritra ny 12 volana amin'ny ho avy. Na inona na inona vidin'ny tanjon'ny orinasa 12 volana na vinavinan'ny fidiram-bola, ny "Vahaolana azo antoka amin'ny ho avy" azo antoka fa hahatratra ny tanjon'ny vola miditra 12 volana ao anatin'ny 24 ora mialoha ny vokatra na serivisy natolotra. Tsy mila traikefa, fahaizana, asa, fotoana, ezaka, na loza mety hitranga avy aminao mba hahatratrarana ireo valiny ireo. 100% ny asa vita ho anao.
Tsy misy teoria sarotra. Alefaso fotsiny ny tanjonao mandritra ny 12 volana anio. Handray fidiram-bola eo noho eo ianao ao amin'ny kaontinao, izay mitovy amin'ny tanjon'ny fidiram-bolanao 12 volana, ao anatin'ny 24 ora.
NY SOA TOA NY
PROGRAMA FIAROVANA REVENUE
Avadiho ny tanjon'ny varotra 12 volana anao
ho fidiram-bola ao anatin'ny 24 ora!
WTE hanampy anao hiteraka fidiram-bola ao anatin'ny 24 ora hifanaraka amin'ny tanjon'ny vola miditra 12 volana sy handoavana ny vola miditra ao amin'ny kaontinao ary koa handoavana ny vidin'ny asa aman-draharahanao sy ny fandanianao manokana hatramin'ny vola ao amin'ny kaontinao.
Ohatra, ny orinasa angovo iraisam-pirenena dia nampiasa ny Exchange hanombatombanana sy hahazoana 2.85 miliara dolara ao anatin'ny 24 ora.
Saundra Toedtling dia namadika tanjona fidiram-bola 12 volana ho fidiram-bola $ 600M, ao anatin'ny 24 ora hisoratana anarana ho an'ity programa ity
Markus Kieffer-Higgins dia nanakaiky ny $ 250,000,000 tao anatin'ny 24 ora taorian'ny nisoratana anarana ho an'ity programa ity.
Azonao atao ny manadihady tantara fahombiazana bebe kokoa etsy ambany.
Arovy ny orinasanao amin'ny
mitaky fanimbana, fihenam-bidy na fatiantoka ny fidiram-bola, ny vidiny ary ny fiovaovan'ny vola
Arovy ny volanao:
Ny 'Programme Protection Revenue' dia manome fiarovana amin'ny fidinan'ny fidiram-bola, ny fividianana vola ambany, ny tombom-barotra ambany ary ny fatiantoka ara-bola.
Miaraka amin'ny 'Program Revenue Protection', azonao atao ny manome antoka ny fidiram-bola azo tombanana sy tombony ho an'ny orinasanao mandritra ny 12 volana ary hofoanana ny singa tsy azo antoka, tsy fahombiazana, fivarotana ambany, vola mivoaka ambany, tombom-barotra ambany, fatiantoka ara-bola ary risika avy aminao orinasa
FANAMORANA NY risika rehetra amin'ny orinasa:
Azonao atao ny manafoana ny risika rehetra amin'ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny 'Program Revenue Protection' mba hialana amin'ny fiovan'ny vidin-javatra, ny fiovaovan'ny vola, ny counterparty, ny fifanarahana, ny vola, ny trosa, ny tsena, ny vola azo, ny fampandehanana, ny lalàna, ny voajanahary, ny valanaretina viriosy ary ny risika politika.
Azonao atao ny miantoka ny fahombiazana sy ny tombom-barotra amin'ny asa aman-draharaha rehetra ataonao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana tombantombana azo antoka sy azo antoka amin'ny alàlan'ny 'Program Revenue Protection' alohan'ny hanaovana fampiasam-bola.
TANTARA FAHOMBIAZAN'NY CLIENTS IZAY NISY sonia Ho an'ity fandaharana ity